Waa maxay sababta aad rabto in aad muraayad aad android in aad TV | android muraayad phone
Maxaad Ma rabtaa in aad muraayad Your Android inay Your TV?
Toban sano ka hor fikradda ah in aad rabto in aad lahaa Mirror screen ee telefoonka gacanta si aad television muuqata doqon laakiin hadda in ay jirto content wax badan oo ku saabsan qalabka our mobile ka kulan HD video, waxa ay darana waxtar leh in ay qarxiyaan aad telefoonka ee bandhigay yar oo si size television. Akhri sida aan ku tuso sida. Sida ku dhawaad ​​wax dhibaato ah casriga ah janjeedha waxaa jira habab kala duwan si ay dhibaatada ku dhaco content off telefoonka aad Android oo rogtid oo aad HDTV. Waxaad isticmaali kartaa Chrome la shubay inuu ka eryo filimada, sawiro, iyo wax badan oo dheeraad ah oo dhan. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa dongle Miracast la telefoonka 4.2+ Android inay wirelessly buugii telefoonka aad Android
Xasilloonida iyo bandwidth ee xidhiidhka la leh banki: Inkastoo ay sida weyn ee kabka Chrome waxaa hoorto content warbaahinta iyo in dalabyo Miracast (xoogaa deganayn) screen mirroring, waxaa jira hal wax ma ay samayn (oo ma awoodo) dalab ka. Haddii aad rabto in aad kaamil ah mirroring la qarsoon cajiib ah hooseeyo, halis lahayn faragelinta wireless ama ka tagey, dhalmo codka oo tayo leh, iyo nolasha isticmaalka screen mirroring meel kasta oo ay jirto dekedda HDMI ah, ka dibna waxaad u baahan tahay xidhiidh ka dhexeeya banki aad telefoon iyo bandhigay .
Part I: in aad TV la cable Mirror telefoonka aad android.
Marka aad xaqiijisay in aad telefoon taageertaa MHL, waxa kaliya ee aad u bahan tahay cable MHL ah oo aad telefoonka. Tani waa, ilaa iyo haatan, qaybta ugu adag (oo laga yaabo inay niyad-jab) ee nidaamka oo dhan. Marka aad leedahay cable xaq waxa ay socoto, laakiin haddii aad iibsato cable qaldan ee qalab aad aad ku socoto ay waqti aad u xun. Si lagaaga caawiyo in aad ka fogaato niyad ah, aynu eegno waxa ay ka dhigeysaa fiilooyinka kala duwan MHL leheyn iyo sida loo xusho mid ka mid sax ah. Waxaa hadda jira saddex nooc oo cable MHL on suuqa. Nooca ugu horeeya waxa loo yaqaan micro-USB-to-HDMI adabtarada ee Standard oo uu leeyahay 5 biinanka ku xira USB micro. Tani waa nooca cable isticmaalaan qalabka ugu MHL ah. Nooca labaad waa Samsung ah micro-USB-to-HDMI adabtarada iyo 11 biinanka ku xira USB micro. Tani waa nooca cable isticmaalaan qalabka ugu Samsung ah (in kasta oo dhowr ka mid ah qalabka ay isticmaalaan heerka 5-pin ah).
Ugu dambeyntii, waxaa jira waxa loo yaqaan cable dadban MHL. Waxa intaa dheer in dulmar nooca pin ee kor ku xusan, adapters MHL soo qaab dadban oo firfircoon. Fiilooyinka firfircoon, sida kuwa aan ku xusan tuduca hore, waxaa ka mid ah adabtarada ah ku shaqeeya oo kuweeda heerka MHL si ay meel bannaan ka jir HDMI si aad furaysto kartaa telefoonka MHL-karti galay TV-ga, borojektar, ama qof qaata wax la dekedda HDMI lacag la'aan ah. Fiilooyinka dadban MHL ha ku darin qabsashada signal firfircoon oo loogu talagalay in loo isticmaalo inta u dhaxaysa aalad MHL-karti iyo bandhigay MHL-karti. Inkastoo aysan haysan cable dheeraad ah oo ku amraya in ay wali ku siin doonaa Tamarta si ay u qalab ku lifaaqan sida cabling heerka MHL ka mid ah gudbinta xoog markii cable la aadeen u dhexeeya laba cutub MHL-karti.
Guud ahaan waxaan kugula talin karaan wax iibsiga ah cable MHL dadban u qalab aad maadaama ay si xun aad xaddidaya. Waxaa jira arrin qalabka Android yar oo taageero MHL suuqa, laakiin tiro ka mid ah qaab MHL-karti waa halkii yar. Runta fursadaha aad ee ka dhacaya xaq bandhigay MHL-karti halka sita telefoonka MHL-karti iyo cable dadban waa xad caato ah. Xitaa haddii aad cable inay ugu horayn isticmaalaan guriga (oo ay leeyihiin TV ah MHL-karti) waxa macno aad u yar si ay u iibsadaan cable ah dadban MHL in kaliya la shaqeeya qaab la xusho marka aad ka iibsan kartaa adabtarada MHL firfircoon oo kale jaban wax iibsiga in shaqayn doona dekedda wax HDMI soo bandhigay wax.
Qaybta II: Sidee Mirror aad android in aad TV by Wireless?
Roku ee doorashada sii kordhaysa ee hoorto qalabka waa cadcad dilka ah ka mid ah muraajiceeyey iyo macaamiisha si isku mid ah. Waa maxay runtii aad ka caagan Roku waa ay doorashada doqonimo ah barnaamijyadooda, oo hadda tiro ka badan 1,000. Waxaa oo dhan aawadood barnaamijyadooda kuwa Roku markii hore na liiska. Si kastaba ha ahaatee, halka nidaamka Roku ahaa muddo dheer bereft kasta oo mirroring hooyo dhab ah, waxa ku dhawaaqay shirkadda October 2 ee 2014 in ay Roku 3 iyo Roku Streaming ul (HDMI) haatan ku bixin doonaan si toos ah-daaha mirroring u Android.
Inkastoo liiska buuxa ee qalabka socon lama shaacin, adeeg beta waa la heli karo Android 4.4.2 socda ayaa sidoo kale qalab aad waa in uu leeyahay xidhiidh wifi ah, isagoo si ay u sameeyaan screen mirroring iyo waa in ay leeyihiin software ugu dambeeyay ee android socda ee waxaa ka bean jelly in KitKat iyo sidoo kale hurdiga ah taas oo firmware ugu dambeeyay taas oo ahayd in la sii daayo dhowr bilood ka hor. Shaacinta uu sidoo kale sheegay in "hardware waa mid lagu taageerayo screen mirroring," inkasta oo qalabka ugu sameeyo mid ka mid ah qaab ama mid kale
Android sidoo kale tuuri karo ay content ugu jecel yahay in TV-ga la barnaamijyadooda caanka ah dhowr oo ay ku jiraan oo dhan ku tuur naga habka doorbidayso, iyo Twonky Ray, dambaysta ah ee kaas oo lagu faahfaahiyey DT ee 'Turbocharge. Si hufan badan airplay laftiisa.
Ka hubi saaraha qalab aad u tilmaamo gaar ah oo ku saabsan sida si ay awood screen mirroring u qalab aad.
-Go In Settings menu
- Tubada Connections
- Tubada Screen Mirroring
- Hubi in Screen Mirroring qarka u saaran inuu ON
- Ka dib markii baaritaan, ka jaftaa Roku bandhigay wireless ku qoran
- Dialogue oo muujinaya qalab oo la isku dayayo in ay ku xidhmaan Roku
- Mar waxaa ku xiran ka dibna qalab aad bilaabi doonaan in ay la Seme shaashadda TV aad.
Si kale si ay u helaan qalab android aad socon si ay u awoodo u ogolaanaysa mirroring on your TV waa ay soo afjarno qalab markii qalab android aad ayaa la rujin tani waxay u oggolaanaysaa si aad u heshid ay ka buuxaan kara laakiin ay soo afjarno qalab android adiga oo waxa aad u ogolaanaya in ay jejebiyey damaanad aad telefoon, barnaamijka oo loo isticmaali karo in ay ka rujin aad android waa Kingo Android soo afjarno software barnaamijkan waxaa loo isticmaali karaa in ay ka rujin qalab kasta oo android in la og yahay, mar qalab aad ayaa la rujin xataa haddii aanay la mirroring hor aheyn mid u dhigmo ka dibna si aad telefoon aad kala soo bixi kartaa app mirroring ku, by afjarno qalab aad app wuxuu kuu ahaan doonaa kuwo la socon kara telefoonka iyo aad qabsato karaa sida aad u rabto in ay noqon.
> Resource > Emulator > Maxaad doonaysaa in aad muraayad Your Android inay TV?